Nyaya yekuda kuziva yeApple Watch Kukunda | IPhone nhau
Nyaya yekuda kuziva yeApple Watch Kukunda
Sezvinoitwa nerwizi rweGuadiana munzira yayo yese, modhi inonzi Apple Watch Kukunda yaonekwa uye yanyangarika zvakare sekunge sekunge nemashiripiti kubva kuwebsite yekambani.
Sezviri pachena, mushandisi akangwara akawana kutaurwa kwakadai achitarisa webhusaiti yekambani, pamwe achitsvaga Apple Watch inokodzera zvakanyanya zvavanofarira, zvavanotarisira uye zvavanotarisira. Akakurumidza kuiudza kuna 9to5Mac uye fungidziro yakatanga: Tiri kutarisana nemhando itsva yeiyo wachi yeapuro kana kuti ingori zita rekodhi yeNike + modhi iyo mumwe munhu akanganwa kubvisa?
1 Apple Watch Kukunda, zvingave zviri, uye zvazviri
1.1 Sangano iri rinobvepi?
Apple Watch Kukunda, zvingave zviri, uye zvazviri
Kukunda kweApple Watch, unogona here kufungidzira wachi yeApple pasi pezita iro? Se codename, zvakanaka. Kunyangwe sezita remhando ine chimiro ine mukurumbira semitambo seiyo Nike + Zvinogona kushanda (kuzadzisa zvinangwa zvawakaisa kukunda uye nekudaro, unogona kukurudzirwa kubva kune zero zero). Asi kana tichifunga nezvazvo, zita "Kukunda kweApple Watch" ndeyekuzvikudza kushambadza nauseam, uye maakaunzi ekambani haatenderere kuratidzira aine mazita akafanana.
Ndine yakajeka, uye ndinofunga kuti imi mese muchazviona seni: iyo Apple Watch Kukunda Iri ndiro kodhi zita rinoshandiswa nekambani kunongedzera kuApple Watch Nike +, asi muCupertino mune akawanda mabasa ekuita mazuva ese, uye mumwe munhu akanganisa. Asi pakupedzisira, iko kukanganisa kunopa kumutambo wakawanda, uye maitiro ekufunga mahara ...
Sangano iri rinobvepi?
Mareferenzi eiyo isinganzwisisike "Apple Watch Kukunda" yaonekwa pane iyo yepamutemo webhusaiti yeApple muUnited Arab Emiratess. Ikoko, pane rimwe reAppleCare + mapeji ekutsigira, akataura sarudzo dzakasiyana dzekuwedzera warandi iyo iyo Cupertino kambani inopa ye "Apple Watch" uye ye "Apple Watch Kukunda", chigadzirwa icho, sekuziva kwedu tese, chinoita hazvipo.
Pane peji rakafanana, asi mune ino webhusaiti yeApple yeCanada, mhando dzekambani dzekutarisa dzakanyorwa mundima imwecheteyo i "Apple Watch" uye "Apple Watch Nike +."
Kubva pane izvi tinogona kutora chimwe chinhu chiri nyore, zvakapusa zvekuti kunyangwe imbwa yangu yakaratidza kuti yainzwisisa (hongu, dzimwe nguva inotaura neni, saImperioso kuna Jesús Gil): kambani yedu yatinodisisa, senguva dzose mairi uye mune mamwe makambani mazhinji, yakashandisa mukati zita rekodhi "Kukunda" kureva kune ingangove iri Apple Watch Nike +. Nekudaro, kune avo avo, nerusununguko rwese rwunobvumidzwa nemafungiro avo, vanofunga kufunga kuti Apple yakaronga kudaidza iyo Apple Watch Nike + seApple Watch Kukunda, kusvikira pane imwe nguva, pamwe nekuzarurirwa kwaMwari, vakafunga kuti chinenge chakakodzera. chinja zita racho kuita chimwe chinhu chinotariswa, uchifunga ipapo kuchidaidza kuti Nike +. Sezvandambotaura kare, kufunga kwakasununguka.
"Zvinogoneka kuti iyo" Apple Watch Kukunda "chigadzirwa chitsva, chigadzirwa chakaraswa kana rimwe zita reimwe vhezheni yeApple Watch", vanodaro kubva kuMacRumors [zvirokwazvo, vachifungisisa zvese zvingangoitika, saka hapana munhu anokundikana], uye ichienderera mberi, nerombo rakanaka, ichisarudzira zviri pachena: “asi ukapihwa humbowo kubva pamapeji maviri akafanana eAppleCare +, zvinoita sekunge kuti 'Apple Watch Kukunda' raive zita rekodhi kana raifungidzirwa rimwe zita reApple Watch rakagadzirwa nekubatana naNike ». Bata h… ..! 😂😂
Uye kuenderera mberi nekuwedzera chakavanzika nezve iyo isipo Apple Watch Kukunda, iyo imwechete AppleCare + peji rekutsigira reApple Watch, asi panguva ino mune yayo US vhezheni, inongoreva chete kuApple Watch, pasina kutaura chero chaiwo modhi.
Kupedzisa: zviri pachena izvo Ndinogona kutadza; pamwe Apple iri kuronga "kukunda kukunda" mushure mezvose, uye kusvikira zvaratidza zvimwe, chero chinhu chinogoneka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Nyaya yekuda kuziva yeApple Watch Kukunda
Zvakanaka, panogona kunge paine mamwe masara mumafaira eWatchOS ayo anogona kusimbisa kuti pane imwe nguva mukuvandudza iyo Nike + vhezheni yakatumidzwa saizvozvo. Chero ani anoda kuburitsa iyo WatchOS 3 OTA uye kutsvaga mareferensi e "Kukunda"?
Tichifunga nezvekuti iri vhezheni yeApple Watch iyo yakamutsa kufarira vanhu avo kusvika parizvino vanga vasina, raive richiri rakabudirira kodhi zita hahahaha.
Handina kurangarira kuti ndine GM yeWatchOS 3 yakatorwa kubva kuOTA pano! Ona zviri mukati meNanoTimeKit:
Zvakare mu /System/Library/PrivateFrameworks/NanoTimeKit.framework/ tinowana sosi "kukundaNTK-rondedzera-italic.otf", ine nhamba dzinoshandiswa muNike + wachi yekutarisa, saka tinogona kutaura zvakachengeteka kuti "Kukunda" yaive Apple Watch codename Nike +
PS: Iyo Hermès vhezheni yaidaidzwa kuti "Zeus" panguva yekusimudzira.
Nike ndiye mwarikadzi wekukunda. Shots dzinogona kuuya nenzira iyo ...
Ikoko iwe wakave wakanyanya, akabudirira kwazvo Jesu, Athenea Nike.
Kwete chaizvo. Izvo iwe zvaunodoma izita retembere iyo yakatanga kuvakwa panguva yePeloponnesia Hondo. Mungano yechiGiriki, Nike aive mumwarikadzi akazvimiririra, wekukunda, sekutaura kunoita Jesu mune yake tsananguro. Yakanga isiri nguva yakazotevera apo akafananidzwa naAthena maererano nezvimwe zvinyorwa. Vakauya kuzotumidza Athena Nike (Νίκης) semunhu wemwarikadzi Pallas Athena, asi sekutaura kwangu, vane mabviro akasiyana.
Zvakanaka, kana iri muSaudi Arabia, zvinongova kuti havaone iyo + iriko, vanowana mikoko. Ndosaka Apple yabvisa. Barca neMadrid vakaita zvakafanana muzuva ravo nenhoo dzavo kuti vatengese munyika iyoyo. Kushivirira kweMuslim ...
Ehe, ivo vanoshivirira kwazvo. Kunyange zvakadaro ... kumedza kusvikira mudonzvo waguta.
Maitiro Apple Anogona Kubvisa Maketani Ekuchengetedza Kubva kuayo maPhones